Su'aalaha Degdega ah ee leh Tim Cook: "Ma noolaan karo la'aanteed kafeega iyo iphone-kayga" | Waxaan ka socdaa mac
Tim Cook, oo ah Maamulaha Apple, qofkaas badalay sheekada quraafaadka ah ee Steve Jobs oo shirkada ku hogaaminaya wadada shirkadii ugu horeysay qiimaheeda waa 3 trillion dollars, wuxuu had iyo jeer banaanka soo dhigayaa dareenno isku dhafan. Waxaan leenahay kuwa difaacaya iyo kuwa dhahaya isagu kama wanaagsana shirkadan. Damacyo iyo nacayb macno malahan booska aad joogto maxaa yeelay kulligeen waan xiiseyneynaa waa sidee qofka. En wareysi ku saabsan Dadka wax yar ayaan ka ogaan karnaa isaga.
Tim Cook waa qof maamulo shirkadda ugu dhaqaalaha badan adduunka. Marka lagu daro inuu ka mid yahay kuwa ugu saameynta badan. Saameyn uu ku leeyahay agaasimaheeda sidoo kale waana sababta ay had iyo jeer u xiiso badan tahay in wax yar laga ogaado nolosha qofkan. Wareysiga oo la yiraahdo "Su'aalaha degdegga ah ee leh Tim Cook", Maamulaha Apple wuxuu waxoogaa ka wadaagay hawl maalmeedkiisa. Tusaale ahaan, Cook wuxuu sheegay inuu tooso 4-ta subaxnimo, barnaamijka ugu horeeya ee uu furo waa Apple News, mana noolaan karo bilaa bun iyo iphone la’aantiisa.
Cook wuxuu ka hadlayaa ka shaqeynta guriga, wuxuuna sidoo kale la wadaagay rajadiisa mustaqbalka iyo macluumaad yar oo ku saabsan shaqadaada fiidiyoow:
Dareenkaygu wuxuu leeyahay, annaga, weli aad ayey muhiim u tahay in jir ahaan aad isu xiriirtaan maxaa yeelay iskaashigu had iyo jeer maahan waxqabad la qorsheeyay. Hal-abuurnimadu had iyo jeer maahan waxqabad la qorsheeyay. Isagu maalinba maalinta ka dambaysa ayuu isku garaacayaa isla markaana wuxuu horumarinayaa fikrad aad hadda haysatay. Runtiina waxaad ubaahan tihiin inaad wada jir u sameyso taas.
In kasta oo Maamulaha Apple uu doonayo inuu sida ugu dhakhsaha badan ugu soo laabto xafiiska, milicsiga dhammaan waxyaabihii ay shirkaddu qabatay sanadkii la soo dhaafay. Waxa kale oo uu bilaabay 100 milyan oo doolar oo ku saabsan caddaaladda midabaynta isla markaana ballan qaaday inuu noqon doono Kaarboon dhexdhexaad 2030.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Su'aalaha Degdega ah ee leh Tim Cook: "Ma noolaan karo la'aanteed kafeega iyo iphone-kayga"
Intel wuxuu sii wadaa ololahiisa ka dhanka ah Mac-yada oo wuxuu saxeexayaa Justin Long